Ukukhanya - Ukushaya indlwabu kusho ukuthini nokuthi umuntu wenzani?
Ukushaya indlwabu | ukukhanyiselwa
Ukushaya indlwabu kumadoda?
Kanjani ukushaya indlwabu kwabesifazane?
Empeleni, iphuzu elibaluleke kunazo zonke lokushaya indlwabu ukuthi kungokwemvelo ngokuphelele. Ukushaya indlwabu ngisho nokukhona embusweni wesilwane, ngakho akuyona into yokuba namahloni. Ngaphezu kwalokho, umuntu ngamunye uqobo, okungukuthi, akukho iresiphi kubo bonke.
Kusho ukuthini ukushaya indlwabu?
Ngakho-ke, konke kubalulekile ekuziphatheni okwanelisayo, okwenza kube nenzuzo yokuzijabulisa, ngaphandle komlingani kubandakanyekile. Lokhu kungafinyelelwa ngokusebenzisa izandla zomuntu siqu noma ezinye izinto zobulili, ngokuvamile zixhaswa ngemicabango yokuzikhukhumeza, izincwadi, izithombe noma ama-movie.
Ukushaya indlwabu kufeza injongo ebalulekile ekuthuthukiseni kwayo, ikakhulukazi kwentsha: Ngokuhlola isifiso somuntu siqu, bahlakulela ubuhlobo obuhle nomzimba wabo ngesikhathi sokukhulelwa futhi ngaleyo ndlela bafunde ukuthi yiziphi izidingo zobulili abanakho. Ngaphezu kwalokho, ekushaya indlwabu, kanye nangesikhathi sokulala ngokobulili, kukhishwa ama-hormone enjabulo, ukuze akwazi ukunciphisa ukucindezeleka.
Ukushaya indlwabu ngamadoda kulula. Kwabesilisa abaningi, kwanele ukugqugquzela ipeni ukuba ifinyelele ekugcineni. Ngalesi sizathu, umshini uhlanganiswe ngesandla esisodwa, amandla esibambiso ancike ngokuphelele ekuthandeni kwakho, futhi ukunyakaza okuhambisanayo nokuya phansi kuqinisekisa ukujabula okulungile.
Ukushaya indlwabu kumuntu
Okubalulekile lapha kusetshenziswa ukugcoba okufanelekile ukuze ugweme ukukhathazeka. Ukuqina ne-tempo kunganda kancane, noma kuguquke kaningi.
Kodwa-ke, kukhona okuthiwa yi-masturbator yamadoda, ahlotshaniswa kumuntu wangempela wesifazane. Lezi zihlahla zamabhagizi ngezinye izikhathi zizwa ziningi, ngezinye izikhathi zingaphansi kokufana nokuphila, futhi ngezinye izikhathi zihlonyelwe ezinye izibhamu ukuze zivuselele noma ngisho nezinyunithi ezincane zokudlidliza.
Yiqiniso, amadoda angaphinde ajabulise injabulo yabo: Amapulisi akhethekile avimbela igazi ukuba lingaphumi emzimbeni we-erectile ngemuva komvuthwandaba. Ukwakhiwa kuhlala kungezansi nxazonke.
Kunconywa ukuthi futhi uhlale ulungele ihekhi, nhlobo, ngeke kudingeke uphumele endlini yokugezela ngemva nje komvuthwandaba. Izindlela ezithile ezivela kumaphephandaba, isibonelo ukusetshenziswa kwe-apula pie noma amashubhu ahlanzekile, akukhuthazwa ngezizathu zokuhlanzeka ngendlela. Uma ufuna ukufaka izinto, kufanele usebenzise ama-sextoys afanele kuphela, ngoba kuphela lesi siqinisekiso sokuthi akukho zingozi zezempilo ezivela. Ngemuva kokusetshenziswa, lezi zithoyizi kufanele zihlanzwe ngokufanele.
Izithembiso ezithandwayo ezikhethekile kumadoda ukuvuselelwa kwe-P-spot, amasentimitha ambalwa angaphakathi odongeni lwangaphakathi lwangaphakathi. Amanye amadoda angakwazi ukubhekana nalokhu kuphela ngaphandle kokuthinta i-penis i-orgasm enamandla-lapha, kudingeke ulingeke. Kodwa-ke, nansi indlela ehlakaniphile efanelekayo, ngoba i-anus kumele iqale isetshenziselwe ukwelashwa okungavamile. Ukuze uhlangabezane ne-P-iphuzu ngokuphelele, kunezithoyizi ezenziwe ngaphambilini, ngezinye izikhathi ngisho nama-vibration units.
I-plus ekhethekile inikeza i-masturbation empilweni yamadoda: Ukujula okuvamile, kungakhathaliseki ukuthi ukushaya indlwabu noma ubulili, kuvimbela izinkinga zesifuba esizayo.
Kwabesifazane, ukushaya indlwabu kuyinkimbinkimbi kakhulu, ngoba akuwona wonke owesifazane osheshayo ophendula ngokushesha. Ngokuvamile ukusikhipha okuhlanzekile kwendawo yokushicilela akwanele. Kunconywa ukugqugquzela i-clitoris ne-vagin ngesikhathi esifanayo ngenjabulo enkulu - futhi, uma kungenzeka, i-G-indawo nayo nayo.
Umama wokushaya indlwabu
Lokhu kufakwe engxenyeni engaphakathi yangaphakathi yecala. Angakwazi ukutholakala ngomunwe wakhe, kodwa kulula kakhulu ngezocansi ezikhethekile, ezenziwe ngaphambilini. Okufanelekile, lezi zithoyizi nazo kufanele zidlidlize, ngakho-ke abesifazane besithombeni sokushaya indlwabu kunesimo se-orgasm esiningi.
Njengomthetho jikelele, ukuqina nokuhamba kwethinta kufanele kwandiswe kancane kancane. Ezinye izingxenye ezingaqondakali zowesifazane zitholakala kangcono ngenjabulo eyanda, futhi ukuthinta kwabo kuzizwa kuhle kakhulu emva kwesikhashana. Ngaphezu kwalokho, abesifazane basuke bemanzi kuphela kusuka ezingeni elithile - ngakho-ke ekuqaleni kungase kube kufanelekile ukusebenzisa amakhemikhali.
Abesifazane abaningi bathola ukugqugquzela okunye okugqugquzelayo, isibonelo ngokusebenzisa ipulagi elidala, elijabulisa kakhulu. Lokho kumele kukhululeke futhi kuhlolwe nge-lubricant eziningi. Konke kungenzeka, akukho okumele kwenziwe. Ukugubha kakhulu kungabuye kube ukugqugquzela ngesikhathi esisodwa kwezingono, isibonelo nge-braces noma iminwe yesandla samahhala.
Kunezinsiza eziningi ezihlukene zokushaya indlwabu kwabesifazane. I-spectrum ranges kusuka ku-dildo elula kuya ku-vibrator kuya kwimishini elula lapho abesifazane bengakwazi ukugibela khona ekugcineni. Ezimweni eziningi, noma kunjalo, izandla ezimbili noma i-dildo noma i-vibrator zanele.
Uma usebenzisa izandla kufanele uqiniseke ukuthi izinhlamvu zeminwe azikho izingalo ezibukhali futhi zihlanzekile izandla zakho ngaphambi kokushaya indlwabu.
Ikakhulukazi, abesifazane abakuthola kunzima ukufinyelela i-orgasm ngesikhathi sezocansi ezijwayelekile bazuzwa ngokuzijwayela kangcono nezindawo zabo ezihlukumezayo ngesikhathi sokushaya indlwabu. Ngokuhlangenwe nakho okunye, bangabonisa ngobumnene umlingani ngesikhathi sokulala ngokobulili, yiziphi izingxenye okufanele azivuselele ngazo futhi azilethe ekugcineni kombono omkhulu.
Ukukhanyiswa - isakhiwo kanye nokusebenza kwamabele amabhinqa